nanoe-G လေထုသန့်စင် စနစ်သည် လေထုထဲရှိ PM2.5 တမျှ သေးငယ်သော ဇီဝသက်ရှိလေးများနှင့် ဖုန်မှုန့်များ သက်ဝင်မှု မရှိစေရန် ၎င်းတို့ကို ဖေလ်တာဖြင့် စစ်ထုတ် သန့်စင်ပေးပါသည်။ အသက်ရှူရပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သင့် နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်စင်လိုက်ပါ။
၁. လေထုထဲတွင် ပေါက်ဖွားသည့် အမှုန်လေးများကို ဖယ်ရှားပေးသည် (၉၉% အထိ)
၂. ဖေလ်တာထဲတွင် ပိုးသတ်ပေးခြင်း (၉၉% အထိ)
ကျွန်ုပ်တို့သည် လေထဲတွင် လှည့်ပတ်နေသော သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် တွယ်ကပ်နေသော မမြင်နိုင်သည့် ဘက်တီးရီးယားများ၊ ပိုးမွှားများ၊ အကောင်လေးများနှင့် မှိုများစွာကို နေ့စဉ် ရှူသွင်းနေကြပါသည်။
nanoe-G ဂျင်နရေတာသည် အသေးဆုံးအထိ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော အီလက်ထရုတ်မှ နက်ဂတစ်အိုင်းယွန်း ၃ trillion ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ပြီးနောက် သဘာဝ အိုင်းယွန်းဓာတ်ပါသော လေက nanoe-G ဂျင်နရေတာမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော နက်ဂတစ်အိုင်းယွန်းများကို ဖြန့်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး လေထဲတွင် ပေါက်ဖွားသည့် ဖုန်မှုန့်လေးများနှင့် တွယ်ကပ်စေပါသည်။
nanoe-G ကို ဘယ်လိုထုတ်ပေးသလဲ
(၁) nanoe-G ဂျင်နရေတာသည် nanoe-G နက်ဂတစ်အိုင်းယွန်း ၃ trillion ကို ထုတ်ပေးသည်။
(၂) nanoe-G နက်ဂတစ်အိုင်းယွန်းများသည် သဘာဝ အိုင်းယွန်းဓာတ်ပါသော လေကို အသုံးပြုပြီး ဖေလ်တာဆီသို့ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားသည်။
nanoe-G အိုင်းယွန်းဂျင်နရေတာက နက်ဂတစ်အိုင်းယွန်းများကို ထုတ်ပေးသည်။
PM2.5 ၏ ထိရောက်မှု
လေထဲတွင်ပေါက်ဖွားသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်ရှိ၊ နာနိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ဟားဗက်ကျောင်း၏ အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် သုတေသနပြုသူများမှ တင်ပြထားပါသည်။
စမ်းသပ်နေရာအကျယ် ၄၀ m³ [တာတာမီဖျာ ၁၀ ချပ်စာအခန်းအရွယ်အစား] တွင် မိနစ် ၁၀၀ ကြာ စမ်းသပ်ပြီးနောက် ထိရောက်မှုဖြစ်သည်၊ အမှန်တကယ်အသုံးပြုသော နေရာတွင် ထိရောက်မှု မဟုတ်ပါ။
“လေသန့်စင်ပေးရန်အတွက် အမဓာတ်ထုတ်လွှတ်ပေးသည့် ဆန်းသစ်သောကိရိယာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်မှု”။ Dr. S. Rudnick et al. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဟားဗက်ကျောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး နာနိုသိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်း။
လေထဲတွင်ပေါက်ဖွားသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို nanoe-G ပါဝင်သော လေအေးပေးစက်အသုံးပြု၍ ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း ရှိမရှိ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောနေရာတစ်ခုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကို ကျိုတိုတက္ကသိုလ်နှင့် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပူးတွဲကျင်းပသော နာနိုစာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ တင်ပြခဲ့သည်။
စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းများ- ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားသည့်နည်းလမ်း- nanoe-G အိုင်းယွန်းများကို ထုတ်လွှတ်ပေးမှု။
ဦးတည်ချက်- လေထဲတွင်ပေါက်ဖွားသည့် ဘက်တီးရီးယား၊ စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်များ- သုံးနာရီကြာ အသုံးပြုပြီးနောက် nanoe-G သည် ၂.၇ log 10 အထိ လျှော့ချပေးနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ 1 log10 လျှော့ချမှု
အနံ့အသက်ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှု- လိုက်ကာများနှင့် ဆိုဖာများပေါ်တွင် စွဲနေသော အနံ့အသက်များ
IN-FILTER DEACTIVATION က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ။